6 Qaab Oo Fudud Oo Gacalisadaada Looga Farxiyo (Iska Baro) - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»6 Qaab Oo Fudud Oo Gacalisadaada Looga Farxiyo (Iska Baro)
6 Qaab Oo Fudud Oo Gacalisadaada Looga Farxiyo (Iska Baro)
Aayaha editor Send an email
Waxaan idiin soo gudbineynaa qaabab fudud oo aad gacalisadaada uga farxi kartid, adigoo qaadanaya talooyinkaan fudud ee ay ku siineyso Shabakada Aayaha.
Qadari MArka ay la joogto qoyskeeda iyo saaxiibadeed
Hal qaab oo fudud oo lamaantaada looga farxiyo ayaa ah inaad qadarisid, ku dheh waxyaabo kalgacayl leh oo qurux badan marka ay la joogto saaxiibadeed iyo qoyskeeda; u sheeg sida ay kuugu weyntahay oo aad u jeceshahay gacalisadadaada, markaas waxaa lamaantaada dareensiineysaa inay muhiim kuu tahay.
Si wanaagsan ula dhaqan
Sida aan horey kusoo xusay, ragga iyo haweenka si iskumid ah ayay wax u rabaan. Haweenka waxay jecelyihiin in si wanaagsan loola macaamilo; tani waxay dareensiineysaa kalgacayl iyo qiimeyn — balse ragga ayaa sidoo kale taas jecel, waqti la qaado seygaaga oo si wanaagsan ula macaamil mararka qaad uwad goobaha damaashaadka.
5 Sababood Oo Kulanka Sariirta Uu Muhiim Ugu Yahay Guurkaaga
5 Calaamadood Oo Aad Ku Garan Karto Inaad Guursatay Nin Ama Naag Aanan Kugu Habbooneyn
Cafiska waa qeyb muhiim ah oo kamid ah xiriirka. Xitaa waxa kaloo dhan sameysid balse cafiska uu Meesha ka maqanyahay micno malahan waxyaabahaas — waxay muujineysaa in jacaylkaaga uusan dhab ahayn haddii cafis lagaa waayo.
Ucafi lamaantaada sida aad rabtid in laguu cafiyo oo kale; ha xasuusin gacalisadaada qaladaadkii lasoo dhaafay, si daacadnimo leh oo aad u cafisid xaaskaaga waxay siineysaa farxad.
Qof kasta waa jecelyahay dareenka, qofna xiriir aanan dareen la siineyn, dareenka waa qaababka ugu fudud oo kalgacayl ay iskugu muujiyaan labada lamaane, marka aad lamaantaada siisid dareen waxay tusineysaa inaad qiimeysay oo aad jeceshahay. Sii dareen gacalisadaada wayna ku farxeysaa.
Xaqiiqda waala sheegay, dhammaan waan jecelnahay inaad maqalno waxyaabo wanaagsan oo nala amaano, balse amaanta gaar uma ahan haweenka kaliya balse sidoo kale.
Ammaanka waa qaab kale oo looga farxiyo lamaantaada, haddii aad rabtid inaad ka qoslisiisid gacalisadaada fadlan ammaan.
Taagere u noqo
Umuji rabitaan gacalisadaada oo noqo mid taagan, adigo sidoo kale sheegaya sida aad ga fakartid haddii aysan intaas ku farxin ogoow inaad la joogtid qof qaldan oo aanan kgu habooneyn
Facebook Twitter LinkedIn Reddit WhatsApp Viber Share via Email Print
Haddii Xaaskaaga Ay Sameyso Waxyaabahan, Si Daran Ayay Kuu Jeceshahay
Xikmado Jacayl Oo Aad Kusoo Jiidan Karto Gabadha Aad Jeceshahay
Al-Fanaan Khadar Ibraahim Keyow oo dib u helay Xorriyadiisa
Isticmaalka badan ee taleefanka iyo 3 Waxyaabood oo halis ah oo uu leeyahay
9 Waxyaabood Oo Nin Kasta Uu Ka Rabo Gabadha Uu Doonayo Inuu Guursado
10 Waxyaabood Oo Macaan Oo Gabar Kasta Ay Jeclaan Lahayd Inay Ka Maqasho Saaxiibkeed
Heesta Kabax Maanka ee Fanaanka Cawaale Aadan oo qoraal ah (Akhri)
Wax Badan Ka Ogoow Cudurka Kansarka Beerka!
Daraasad soo bandhigtay hal arrin oo lamaaneyaasha shaqooyinka guriga isla qabta ay dheeryihiin kuwa kale
DIGNIIN:- 3 Siyaabood Oo Taleefankaaga Gacanta Kuugu Keeni Karo Dhimasho
Eating Lots of Eggs Might Be Bad Again
Su.aal dumar dada ayey dhalmadaayaan imisa jir...
Waan ka h elaa qoraa ladiina...
Cabdi Qadar maxamed
This information is very good and interesting...